Tag: xiriirka dib u eegis | Martech Zone
Tag: xiriirka dib u eegista
Sida loo dhiso Xiriirinta Dib-u-eegista ee Google, Bing, Yelp, iyo More…
Axad, Juun 4, 2017 Axad, Juun 4, 2017 Douglas Karr
Dariiqa muhiimka ah ee lagu horumarin karo darajadaada qiimeyn kasta iyo bogga dib u eegista ama raadinta maxalliga ah waa in laqabto dib u eegis dhowaan, soo noqnoqotay, iyo mid aad u fiican. Si taas loo sameeyo, waa inaad u fududeeysaa macaamiishaada, in kastoo! Uma baahnid inaad kaliya weydiisatid inay kaa helaan bogga oo ay dib u eegaan. Raadinta badhanka dib u eegista ma noqon karto wax ka gaabiya jahwareerka. Marka, habka ugu fudud ee lagu qaban karo dib u eegistaas ayaa ah